Kahor kulanka Barcelona ee caawa… Imisa gool ayuu Lionel Messi ka dhaliyay kooxda Osasuna? – Gool FM
(Barcelona) 06 Maarso 2021. Weeraryahanka kooxda Barcelona ee Lionel Messi ayaa isku diyaarinaya kulan aad muhiim ugu ah heerka Horyaalka La Liga ee dalka Spain, kaasoo ay kula ciyaari doonaan naadiga Osasuna.
Barcelona ayaa kulankan ciyaari doontaa iyadoo la riyaaqsan guushii ay ka soo gaartay Sevilla, isla markaana ay u gudubtay kulanka finalka ah ee Copa del Rey, in kasta oo Osasuna ay bixisay qaab ciyaareed fiican isbuucyadii ugu dambeeyay.
Haddaba Osasuna ayaa lagu tiriyaa inay ka mid tahay kooxaha uu ugu jecelyahay Lionel Messi inta uu ku guda jiray xirfadiisa ciyaareed ee kubadda cagta, maadaama ay tahay kooxda 7-aad uu ka dhaliyay goolasha ugu badan kaddib Seville, Atletico Madrid, Valencia, Athletic Bilbao, Real Madrid iyo Real Betis.
Messi ayaa ku wajahay kooxda Osasuna 21 kulan labada tartan ee horyaalka La Liga iyo Copa del Rey, wuxuuna kaga dhaliyay 25 gool, wuxuuna sidoo kale caawiyay 7 gool kale, taasoo ka dhigeysa inuu ka qeyb qaatay 37 gool ay Barcelona ka dhalisay naadiga Osasuna.
Lionel Messi ayaa seddexleey ka dhaliyay labo jeer kooxda Osasuna, sidoo kale wuxuu ka dhaliyay Super Hattrick, isagoo ku hoggaamiyay Barcelona inay guul gaarto 17 kulan, halka ay barbardhac wada galeen 2 kulan, sidoo kale waxay guuldarro ka soo gaartay 2 kulan.